နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် ဆားဘီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Ivica Dacic အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | NLD
Home Appointment နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် ဆားဘီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Ivica Dacic အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် ဆားဘီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Ivica Dacic အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Posted By: mygate wayon: ဇနျနဝါရီ 30, 2019 In: AppointmentNo Comments
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဆားဘီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Ivica Dacic အား ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံအကြား ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သည့် သမိုင်းကြောင်း နှင့်အညီ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား တည်ထောင်ထားရှိသည့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနများအကြား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲများ ပုံမှန် ကျင်းပသွားရေး၊ နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာ၌ နှစ်နိုင်ငံအကျိုးတူကိစ္စရပ်များတွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးကိစ္စရပ်များနှင့် သတင်းမီဒီယာကဏ္ဍတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရေး ကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်၊ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာနနှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ သညျဆားဘီးယားသမ်မတနိုငျငံ၊ ဒုတိယ၀နျကွီးခြုပျနှငျ့ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး H.E. Mr. Ivica Dacic အား လကျခံတှဆေုံ့
ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံတျော၊ နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ၊ နိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ ဆားဘီးယားသမ်မတနိုငျငံ၊ ဒုတိယဝနျကွီးခြုပျနှငျ့ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး H.E. Mr. Ivica Dacic အား ယနနေံ့နကျ ၁၀ နာရီတှငျ နိုငျငံတျောသမ်မတအိမျတျော၌ လကျခံတှဆေုံ့ခဲ့သညျ။
တှဆေုံ့စဉျ နှဈနိုငျငံအကွား ခငျမငျရငျးနှီးစှာ ထိတှဆေ့ကျဆံခဲ့သညျ့ သမိုငျးကွောငျး နှငျ့အညီ နှဈနိုငျငံဆကျဆံရေးနှငျ့ စီးပှားရေးပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုတိုးမွှငျ့ရေး၊ နှဈနိုငျငံအကွား တညျထောငျထားရှိသညျ့ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနမြားအကွား ညှိနှိုငျးဆှေးနှေးပှဲမြား ပုံမှနျ ကငျြးပသှားရေး၊ နိုငျငံတကာမကျြနှာစာ၌ နှဈနိုငျငံအကြိုးတူကိစ်စရပျမြားတှငျ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျမှု တိုးမွှငျ့ရေးကိစ်စရပျမြားနှငျ့ သတငျးမီဒီယာကဏ်ဍတှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျသှားရေး ကိစ်စရပျမြားကို ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာ ဆှေးနှေးခဲ့သညျ။
တှဆေုံ့ပှဲသို့ အပွညျပွညျဆိုငျရာပူးပေါငျး ဆောငျရှကျရေးဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးကြျောတငျ၊ သမ်မတရုံးဝနျကွီးဌာနနှငျ့ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနတို့မှ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွသညျ။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုင်ဂျီးရီးယားသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ahmed Nuhu Bamalli အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနှငျ့ နီပေါဖကျဒရယျ ဒီမိုကရကျတဈသမ်မတနိုငျငံ သမ်မတ မစ်စဈ ဘီဒီယာဒဗေီဘနျဒါရီ တို့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေး
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ အာဆီယံအတှငျးရေးမှူးခြုပျအား လကျခံတှဆေုံ့
အောကျတိုဘာ 04, 2019
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ အာရှရေးရာအထူးကိုယျစားလှယျ မစ်စတာ စှနျးဂျေါရှနျးအား လကျခံတှဆေုံ့
စကျတငျဘာ 13, 2019